Local Sheet - ဝီကီပီးဒီးယား
လေ့လာရေး ဒေတာ (Epoch )
၁၇ Mly (၅ Mpc) 
၁.၅ Mly (၀.၅ Mpc) 
၀ Mly (၀ Mpc)
Local Sheet ဆိုသည်မှာ နက္ခတ္တဗေဒပညာရပ်တွင် Local Group ၏ နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီနှင့် အခြားသော ဂယ်လက်ဆီများ ပါဝင်သော လေ့လာနိုင်သော စကြာဝဠာအနားပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းနယ်နမိတ်သည် အချင်းဝက်အားဖြင့် ၇ Mpc (၂၃ Mly) ခန့် ၀.၄၆ Mpc (၁.၅ Mly) အထူ တည်ရှိကာ ယင်းအလွန်၏ ဂလက်ဆီများ၏အလျင်သည် မတူညီသောအလျင်ဖြင့် ရွေ့လျားကြသည်။ Local Group သည် Local Sheet နှင့် တူရုပြုကာ အလျင်အားဖြင့် 7004660000000000000♠66 km/s သာရှိသည်။ အတွင်း ဂယ်လက်ဆီများ၏ ယေဘုယျအလျင်မှာ 7004400000000000000♠40 km/s သာလျင် ရှိသည်။ အနီးအနားရှိ တောက်ပသော ဂယ်လက်ဆီများသည် Local Sheet တွင် ပါဝင်သည်။ Local Sheet သည် Virgo Supercluster (Local Supercluster) နှင့် Local Volume ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Council of Giants သည် ကြီးမားသော ဂယ်လက်ဆီ ၁၂ ခု၏ ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Local Sheet ထဲမှ Local Group အား ဝိုင်းရံထားကာ အချင်းဝက်အားဖြင့် ၃.၇၅ Mpc (၁၂.၂ Mly) ရှိသည်။ ယင်း၏ ၁၀ ခုသည် ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီများဖြစ်ပြီး ကျန်သောဂယ်လက်ဆီများမှာ ဘဲဥပုံစံ ဂလက်ဆီများဖြစ်ကြသည်။
"Council of Giants" ထဲက ဂလက်ဆီများ
NGC 253 Sculptor Galaxy Sculptor ၁၁ ၁၀.၈၀၅
PGC 9892 Maffei 1 ကယ်ဆိုပီးယား ၁၁ ၁၀.၉၂၈
PGC 10217 Maffei2ကယ်ဆိုပီးယား ၁၁ ၁၀.၄၉၃
IC 342 ကျားသစ်ကုလားအုတ် ၁၁ ၁၀.၃၀၂
NGC 3031 M 81 အာရှာ မေဂျာ ၁၂ ၁၀.၉၀၅
NGC 3034 M 82 အာရှာ မေဂျာ ၁၁ ၁၀.၅၃၇
NGC 4736 M 94 Canes Venatici ၁၅ ၁၀.၄၅၈
NGC 4826 M 64 Coma Berenices ၁၆ ၁၀.၄၉၆
NGC 5236 M 83 ဟိုက်ဒရာ ၁၆ ၁၀.၆၄၂
NGC 5128 စင်တောရပ် အေ စင်တောရပ် ၁၁ ၁၁.၁၆၉
NGC 4945 စင်တောရပ် ၁၂ ၁၀.၅၂၈
ESO 97-G13 Circinus Galaxy Circinus ၁၄ ၁၀.၅၅၉
* ထုထည်သည် နေထုထည်ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Milky Way amidsta'Council of Giants'"၊ Science Daily၊ 11 March 2014။
↑ ၂.၀ ၂.၁ "Our Peculiar Motion Away from the Local Void" (March 2008). The Astrophysical Journal 676 (1): 184–205. doi:10.1086/527428. Bibcode: 2008ApJ...676..184T.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Tully၊ R. Brent (May 2008)၊ "The Local Void is Really Empty"၊ Dark Galaxies and Lost Baryons, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium၊ 244၊ pp. 146–151၊ arXiv:0708.0864၊ Bibcode:2008IAUS..244..146T၊ doi:10.1017/S1743921307013932
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ McCall, Marshall L. (29 April 2013). "A Council of Giants". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 440 (1): 405-426. doi:10.1093/mnras/stu199. Bibcode: 2014MNRAS.440..405M.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Sheet&oldid=476433" မှ ရယူရန်